success story(success story) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
‘अलीबाबा’ कम्पनीका प्रमुख ज्याक मा; जो कुशल शिक्षकहुँदै ई–कमर्सका माध्यमबाट एसियाकै धनी व्यक्ति बने
काठमाण्डौ । चीनको सबैभन्दा ठूलो ई–कमर्स कम्पनी ‘अलीबाबा’ का को–फाउन्डर तथा प्रमुख ज्याक मा आफ्नो ५५ औँ जन्मोत्सव भोलि सेप्टेम्बर १० तारेखमा मनाउँदैछन् । ज्याक मा आफ्नो जन्मोत्सवकै दिन कम्पनीबाट बिदा लिँदैछन् । अलीबाब सुरु गर्नुअघि ज्याक मा एक सामान्य शिक्षक थिए । कम्पनी छाडेपछि पुनः उनी शिक्षक पेसामै गएर मानवसेवा गर्ने सोचमा...
सेयरको नशा चढ्दै गयो, अनि घर पनि बाँकी रहेन !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विगत २६ वर्षदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा रहँदै पूँजीबजारमा समेत लगानी गर्दै आएका एक पात्र हुन् तिलक कोइराला। हकरदेखि सम्पादकसम्म भएका उनले बजारमा आएर ठूला लगानीकर्ताको छवि बनाएका छन् । पूँजीबजारमा कतिपय लेखरचनाका कारण बेला बेला विवादमा आइरहने पात्र समेत हुन् कोइराला । हाल कोइराला काठमाण्डौ...
‘जसको नशा–नशामा सेयरबजार मात्रै छ’
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । अंकहरुको खेल मानिने सेयर बजार सामान्य व्यक्तिका लागि जटिल विषय होला, तर यसमै भिजेर तथ्य र तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी लगानी रणनीति अपनाउन सके मनग्यै आम्दानी हुने क्षेत्र पनि हो यो । रगतमै सेयरको नशा भएका जुझारु युवा सेयर लगानीकर्ता हुन् हरेराम घिमिरे । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेका घिमिरेको...
-सुदर्शन शर्मा काठमाण्डौ । भनिन्छ अन्तिम सास रहुञ्जेलसम्म आश रहन्छ । ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गरी ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाएका पुरुषोत्तम सापकोटा कुनै चमात्कार नै भइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशासहित प्रतिक्षारत छन् । सेयर बजार र अन्य विविध विकल्पमा लगानी गर्नेहरुले हतपत आफ्नो गल्ती भन्दैनन् वा लुकाउँछन् । तर, सापकोटा यस्ता सेयर...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सेयर बजारले कसैलाई रोडपति त कसैलाई करोडपति बनाइदिएको छ । जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड बनेको सेयर बजारले काभ्रेका एक युवालाई कसरी करोडपति बनाइदियो, आज तिनै पात्रको रोचक कथालाई हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौ । सेयर बजारवृत्तमा परिचित नाम हो, दिनेश हुमागाईँ । हुमागाईँ काभ्रे पनौती घर भई हाल...
'आइपीओका धमला' अर्थात लक्ष्मणबहादुर श्रेष्ठ
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । आइपीओ बाँडफाँडका समाचारहरुमा आउने एउटा तस्वीर जो सबैका लागि जिज्ञासा बनेको हुनसक्छ । उनी को होलान् ? किन सधैं मिडियामा छाउँछन् ? किन प्राय सबै आइपीओ बाँडफाँडको फोटोमा उनै मात्र आउँछन् ? एउटा परिचित अनुहार जो आईपीओ बाँडफाँडका अधिकांश कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन मिडियामा सेलिब्रेटीझैं पुलुक्क झल्किन्छन् ।...
फिल्मबाट कमाउँदै सेयरमा लगानी बढाउँदै
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सामान्यतया दुई डुंगामा खुट्टा राख्नु करियरका लागि निकै चुनौती मानिन्छ । चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने कला र धैर्य थोरै मानिसमा हुन्छ र त तिनै व्यक्तित्वको नाम इतिहासमा लेखिन्छ । चलचित्र कलाकारिता र सेयर बजारलाई एकसाथ लैजाँदै गरेका चर्चित अभिनेता हुन्, आयूष रिजाल । २०५६ सालदेखि कलाकारितामा प्रवेश गरेका उनले...
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । भनिन्छ– ‘संघर्ष नै जीवन हो ।’ रोग, भोक र अभावका बीच नै मानिसले प्रगति गर्ने सिँढी भेटेको हुन्छ । नेपाली समाजमा यद्यपि अहिले पनि जेठो छोराका काँधमा पारिवारिक जिम्मेवारी थमाइदिने प्रचलन छ । यही प्रचलन र बाध्यताको भूमरीलाई चिर्दै २८ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यटन क्षेत्रमा परिचित नाम बनेको छ, शमशेर पराजुली ।...
६६ कित्ता सेयर किनेर बजार प्रवेश गरेका बास्तोला अहिले करोडपति
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । पूँजीबजारलाई नै आफ्नो प्रोफेसन बनाउँदै लगानीकर्ताहरुको हकहितका लागि लड्ने एक युवाको स्टोरी यस साता प्रस्तुत गर्दैछौं । विराटनगर महानगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित दुवाकोटमा बसोबास गर्दै आएका युवा लगानीकर्ता तथा दबाब समूहका महासचिव पनि हुन्, नयन बास्तोला...
ग्राहक नबढून् भनी चाहना राख्ने एक अनौठा व्यवसायीको रोचक सक्सेस स्टोरी !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । उद्यमशीलता नवीनतम सोचको व्यवहारिक परिणति हो । संसारमा उद्यमीहरुले कम अध्ययन र बढी व्यवहारिक अनुसन्धानमा जोड दिंदै ज्ञानको क्षितिजलाई फराकिलो बनाउँदै आएका छन् । सोही ज्ञानको प्रयोगबाट नै व्यवसायिक जगतमा सफलता हासिल गरेका पनि प्रशस्त उदाहरण हामीसामु छन् । अक्सर व्यवसायीहरु कम्पनीका उत्पादनहरु ठूलो...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपालको सन्दर्भमा सेयर बजार भन्नेबित्तिकै आम मानिसहरूको सामन्य बुझाई पैसा कमाउने थलोका रुपमा चिनिन्छ । सेयर बजारबाट नै घरगाडी र शान सौकातको जिन्दगी जिउने पनि यहाँ नभएका होइनन, तर सेयर बजारमा लगानी गरेर गुमाउनेको संख्या पनि उस्तै छ । लोभ र आशाको काल्पनिक संसार झै लाग्ने सेयर बजारमा करोडौं गुमाएर पनि विचलित...
रु. ३ करोडको सेयरलाई ९ करोडको बनाए, लोभ गर्दा सबै गुमाए !
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारमा सबैले कमाउने वा सबैले गुमाउने हुँदैन । नेपालमा पनि कुस्त पैसा कमाउने विशेष आकर्षण मानिएको पुँजीबजारमा भारी मुनाफा भएको बेला लोभले गुमाएका उदाहरण हामीसामु प्रशस्तै छन्। बिजशालाले यसपालि त्यस्तै एक पात्र उभ्याएको छ, जसले लगानीको तीनगुणा मुनाफा बनाउँदासमेत लोभकै कारणले आएको पनि अवसर...
रु. २४ लाखको लगानीलाई एक महिनामै जसले ८४ लाखको बनाए !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपालको धितोपत्र बजारमा भएको एक किसिमको स्वाद चाखिसकेकाहरु जीवनपर्यन्त नै यसै क्षेत्रमा होमिरहेका हुन्छन् । यही विशिष्ट गुण भएको पूँजीबजारकै लागि भनेर सरकारी अफिसरको आकर्षक जागिरलाई पन्छ्याउँदै अनवरत लागिरहेका सक्रिय लगानीकर्ता हुन् दिलीप श्रेष्ठ । संखुवासभाको चैनपुरमा जन्मिएर काठमाण्डौलाई...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारले धेरैलाई राम्रा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । २ दशकदेखिको नेपाली सेयर बजारमा भएको सक्रियताकै कारण लोभलाग्दो उचाइँ पाएका एक भद्र र शालीन व्यक्तित्वका धनी सेयर लगानीकर्ता हुन् तुलसीराम ढकाल । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी चिलिमे हाइड्रोपावर र मध्यभोटेकोशी हा�...
जनता बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग वितरण
उन्नति लघुवित्तद्वारा गत आ.व.का लागि लाभांश प्रस्ताव, कति छ नगद र बोनस सेयर ?
नेसनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा ८०% लाभांश प्रस्ताव, अघिल्लो वर्षको तुलनामा डबल
स्वतन्त्र लगानीकर्ताद्वारा नेप्सेको कार्यालय घेराउ, ५८ बुँदे कार्यान्वयन गर्न माग